Umthandazo wothando Discover ➡ Discover Online ▷ ➡️
Ngamaxesha amaninzi, siye sasabela emthandazweni, nokuba sifuna ukuthuthuzelwa okanye xa silangazelela into ethile nathi sonke. Ke ngoko, apha ngezantsi lolona manyano lubalaseleyo lwe- imithandazo yothando, kokubini njengesibini kunye nosapho, ukuze ukwazi ukufikelela kolo nxibelelwano lokomoya ulifunayo kwaye ufuna ukufikelela kulo kakhulu.
1 Umthandazo wothando lwengelosi
2 Umthandazo wokuphucula ubudlelwane
3 Umthandazo wothando
4 Umthandazo wabalingane
5 Ukuthandazela abantwana
Umthandazo wothando lwengelosi
Khetha umthandazo owuthandayo, ofana noko ufuna ukufezekisa; Kubalulekile ukuba ukhumbule ukuba kufuneka uyenze ngokholo olukhulu, ngokuthobeka nangokuzinikezela. Khumbula ukuba "Ukholo lususa iintaba".
«Ingelosi ethandekayo, ndicela ukuba uzibonakalise entliziyweni yam ukuze undizalise ngamandla akho kaThixo. Nceda, ndicela ngentliziyo yam undincede ndifunde ukuzithanda, kunye nokuthanda abanye. Ndincede ndizive uthando olukhulu loMdali wethu.
Ndincede ndifumane uthando lokwenyani kwaye undincede ndibone ukufika kwayo. Ndiyakucela ukuba undincede ndibonakalise lonke uthando endiva ngalo kwaye ke ndamkele kwaye ndivumele uthando lungene ebomini bam ngombulelo omkhulu kunye nokuzithoba.
Ndifuna ukukubuza ingelosi yothando, ndicela undincede ndibengumntu ongcono yonke imihla, ukuba ndibumbene ngakumbi eNkosini uThixo uSomandla, ukuvula intliziyo yam kuwe nokuba ube sisixhobo sothando olungcwele lweNkosi yethu kunye Lonke uluntu ngamana yonke into endiyicelayo kuwe ingaphantsi kobabalo lukaThixo, ngokungqinelana nokuthanda kwakhe kobuthixo, ngendlela egqibeleleyo neluncedo lwehlabathi liphela.
Ndiyabulela ngokuhambisa umyalezo wam kuThando oluNgcwele, kuba ndiyazi ukuba ngoncedo lwakho olukhulu, iNgelosi eNgcwele yoLuthando, le mvakalelo inkulu iya kwamkeleka. Amen ".
Lo mthandazo umhle ubhekiswa kuThixo wethu wasezulwini, othunyelwe ngeNgelosi yothando, ukuze afumane umyalezo wethu kuye kwaye oku kunganikezelwa ngeyona ndlela ibalaseleyo, ngezigqibo zoThixo wethu uSomandla.
Sifuna ukuzisa umthandazo omnandi kuwe ukuze ukwazi ukucela kunye nokuphucula ubudlelwane bakho njengesibini.
Ngalo mthandazo, uya kuba nakho ukuphucula ubudlelwane bakho, ukuba ngaba ubuchatshazelwe ziingxaki okanye kukungazithembi.
«Namhlanje ndithandaza kumthombo wothando kwindalo iphela, ukuze ube nakho ukunceda ukuphucula ubudlelwane bam bangoku, ndisuse kwaye ndoyise ingxaki nganye ekhoyo kunye nezo zinokuza. Ngamana uthando lungasidibanisa kancinci kwaye lusincede sidibane kwakhona, ukuze sibeke ecaleni iingxaki zethu, ukungazithembi kunye nayo intlungu esizibangele yona. Sincede ukuba siqonde ngakumbi, sibe nomonde kwaye sihloniphe.
Ndiyakucela ukuba usisikelele ngobabalo lothando nangoThixo wethu, ukuze sibe ngabantu abangcono kwaye ngaloo ndlela sibe ngabaphindaphindayo bokulunga nemfesane njengoko iNkosi isifundisile. Sincede ukuba sihlale simanyene kwaye sihlangene ubomi bethu bonke, ukuze sikwazi ukwenza usapho oluhle oluzele luxolo, uthando, uthando, imbeko kwaye ngaphezu kwako konke, umanyano oluninzi.
Siyathemba ukuba lo mthandazo uza kuba luncedo olukhulu kuwe kwaye ungadibana kwakhona neqabane lakho, kwaye ulenze lomelele, libe nomonde kwaye ligcwele ukholo.
Nkosi Somandla, nguwe wedwa ongumthombo wothando, uxolo nemfesane, ndiyakucela ngentliziyo yam yonke ukuba ubusikelele ubomi bam kwaye ubuzalise ngothando lwakho kunye novuyo lukaThixo, ukuze undinike amandla ukuze yonke imihla ndibekhona umntu ongcono kwaye abe msulwa njengoko ndifuna ukuba, ndizele ukulunga kwakho, uthando, imfesane kunye nokholo, undityhalele undikhokele ekubeni ndifane neNkosi uThixo wakho.
Ndidinga ukuba undincede nditsale uthando lokwenyani, ukuze ndifumane umntu endinokwabelana naye ngeentsuku zam nobomi bam bonke, ukuze ndikwazi ukudala usapho lwam kwaye ndibenemfudumalo yam ekhaya. Ezandleni zakho, ndithatha isigqibo sokubeka ubomi bam, abahlobo bam, usapho kwaye ngaphezu kwako konke, bonke abo bantu bafuna uthando lwakho lobuthixo.
Ndikhokele ngokholo nethemba, ukuze ndimfumane umntu ohambelana nalo lonke uthando lwam kwaye andinyanzele ukuba ndibengcono yonke imihla ».
«Nkosi Thixo wethu, siyakucela ukuba usisikelele ngothando lwakho lobuthixo; Sibeka umanyano lwethu ezandleni zakho, ukuze usikhokele ukuba siqhubeke yonke imihla ngaphandle kweenzingo esinokuthi sihlangane nazo endleleni. Ndiyakucela ukuba usincede sifeze injongo yakho yonke imihla, singene nzulu elukholweni kwaye sibalekele kuwe, ukuze sikwazi ukujongana nala maxesha onxunguphalo, iingcinga ezimbi kunye nezimvo.
Yabelana nathi ngobomi bethu, sincede ekwenzeni ikhaya, usapho kwaye ube ngumzekelo wothando lwakho ukuze sikwazi ukufundisa iintsapho zethu indlela eza kuwe. Siphe amandla kunye nomonde kumaxesha anzima, ukuze sixhasane kwaye siphumelele kuyo yonke into efuna ukwahlulahlula.
Yabelana nathi ngomtshato wethu kunye nolonwabo lwethu, kuba kungenxa yakho kuphela apho siya kukwazi ukuxhasana ukuze siqhubeke sonwabile. Ndiyakucela ngokusuka entliziyweni yam ukuba usisikelele kwaye uhlale usikelela uthando lwethu, amen.
Ukuthanda abantwana bethu yinto engachazekiyo, luthando olungafaniyo nolunye, lukhethekile kwaye alunakuthelekiswa nanto, kuba lubandakanya ukhathalelo, ukuthamba, impilo-ntle kunye nokukhuselwa. Ngesi sizathu, sikuphathele lo mthandazo ulandelayo.
Somandla Bawo, siyabulela ngokusinika ithuba lokuba nabantwana, kuba nabo sifumene ulonwabo olupheleleyo, ngaphandle kwamaxhala, uloyiko kunye nokudinwa esinokuba nako, nabo el mundo iyafudumala, inobubele, kwaye igcwele luthando.
Sifuna ukukucela ukuba usincede sibathande kwaye sibamkele njengoko benjalo. Sinike ubulumko bokubakhokela, umonde wokubafundisa, kunye namandla okulwa nazo zonke izinto ezimbi ezifuna ukubenzakalisa. Yomeleza uthando lwethu kwaye usikhokelele kuwe, amen.
Ungafunda ukuba uyayifuna le nto umthandazo ngempilo.